Xhumana nathi-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Sicela usazise uma unombuzo ufuna ukushiya amazwana
Luojiang Industrial Zone, Hemudu Town, Yuyao Ningbo Idolobha, China
UMnu Shu uyaphikelela, imininingwane emincane enjengombukiso owuthandayo womuntu, ingasho okuthile ngabo. Ungumuntu oyi-maniac yemininingwane, akagcini ngokunaka kakhulu imininingwane yemishini kepha futhi uyahlanya ngokuthanda ubhiya.
Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yesipiliyoni emkhakheni wemishini yokuphisa utshwala, uhlala ubheke ezindleleni zokwenza izinhlelo zethu zisebenze kahle kakhulu. I-CADA i-taster ephezulu yobhiya.
Production & QC umphathi
Iminyaka engaphezu kwengu-17 yomholi weqembu ekwakheni imishini yesiphuzo, wazi kahle zonke izici zezindawo zokupheka. Ukushisekela imikhiqizo yethu njengoba uthanda izinhlobo zakho.
Unjiniyela we-R & D
Inkanyezi entsha emkhakheni wezinsiza zokuphisa utshwala, uchwepheshe weminyaka emi-5 ekwakhiweni kwe-3D, ukuthanda ukuphekelwa kwasekhaya, futhi uneso elibukhali lomkhuba wemboni wakamuva.
Isithandwa sikabhiya esisebenza kanzima, isipiliyoni seminyaka eyi-10 kuwo womabili amabhizinisi wokungenisa nokuthekelisa, ulwazi oluhle lokuxhumana kwamasiko ahlukahlukene. Isixazululi senkinga esisetshenziswayo esidalula futhi sixazulule izingqinamba eziyinkimbinkimbi ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende athola isevisi ephezulu nokunakekelwa.
Iminyaka eyi-15 yemishini yezimboni yokuthengisa isipiliyoni kufaka phakathi iminyaka emi-5 yokuthumela isipiliyoni kumishini yokubilisa.
Umdlandla oqotho nomuzwa oqinile wensiza yokuthi ulethe izinsizakalo zokuthengisa ezisezingeni eliphakeme.Ukuqonda kolwazi lomsebenzi kuzongenza ngizethembe ngokwengeziwe ukunikeza usizo lomkhakha iningi lamakhasimende